Nhoroondo Kambani | Mari yezvikamu Winby Industry & Trade Limited
WINBY INDUSTRY & DZIMWE DZIMWE
Nyanzvi yekugadzira Kenduru Kwemakore makumi maviri
sei Sarudza Us?
Professional kenduru nokutengesa kweanopfuura makore makumi maviri
Winby kenduru ine fekitori yayo kuburitsa ese makenduru anonhuwirira.Tine zviitiko zvakapfuma, tekinoroji yakakura mumusika wemakenduru kweanoda kusvika makore makumi maviri. Zvakare isu tine timu yehunyanzvi yekupa yakanakisa sevhisi uye makenduru kune vatengi vedu kubva pasirese pasirese.
Tine zviitiko zvakanaka zvebhizinesi mune zvinotevera zvigadzirwa: Makenduru egirazi anonhuwirira, Mwenje yetii, makenduru eShongwe, makenduru eVotive, makenduru ekuisira, matinji uye zvimwe zvigadzirwa zvemakenduru.
Isu tinotenda kuti mhando yezvigadzirwa uye sevhisi mweya webhizinesi kubatsira vatengi kuchengetedza bhajeti uye nguva. Kuwedzeredza mhando yepamusoro nemutengo wemakwikwi ndicho chivimbo chehukama hwedu hwekubatana kwenguva refu. Parizvino, isu takatora chikamu muCanton Fair kwemakore. Heano mamwe emifananidzo nemutengi wedu kuti utaure.
Tine fekitori redu rekugadzira makenduru ane hwema.Pane mazana emhando dzakasiyana dzemakenduru anonhuwirira.
Zvekushandisa mbishi, tinoshandisa wakisi weparafini, wakisi yesoyisi, wakisi uye imwe wakisi yemiti pamakenduru edu.
Kune hwema, isu tinoshandisa zvinopfuura zana marudzi eanonhuwira akasarudzwa emakenduru anonhuwirira. Vedu kunhuhwirira vatengesi ndivo veCPL hwema, symrise. Iwo ese ari epamusoro maratidziro ekunhuhwirira vanopa munyika.
Isu tinoshandisa kenduru wakisi dhayi kubva kuBekro, inozivikanwa kambani yeGerman kemikari. Kenduru yavo wax dhayi yakanyatsogadzikana, inodzivirira nharaunda.
Isu tine yedu dhizaini uye tinokudziridza dhipatimendi, uye isu tinogona kupa OEM neODM sevhisi yevatengi.
Zvimwe zvinhu zvinogona kuodhwa nediki diki.
Mamwe anonhuwirira akakurumbira uye mavara akanaka anowanikwa.
Makenduru ane hwema anogona kushandiswa mudzimba dzekugezera, mahofisi, yoga makamuri, psychotherapy makamuri, uye makirabhu, nezvimwe. Makenduru ane hwema anogona kurerutsa mamiriro uye crate yerudo uye yakanakisa hwema hwekunhuhwira iwe.
Ndokumbira utarise: Kana uchipisa mwenje unonhuhwirira, madhoo nemahwindo zvinogona kuvharwa kwemaminitsi gumi kusvika pamakumi matatu, zvinowanzoita kuti imba izare nezvinonhuhwirira zvinoenderana, zvinoitika zvinoonekwa kana iwe ukapinda mukamuri kubva kunze. Makenduru anonhuwirira anofanirwa kudzivirirwa munzvimbo dzinoita kuyerera kwemhepo, izvo zvinodzikisa zvakanyanya ruzivo rwekushandisa.
Tsamba yemashoko Ramba wakashongedzerwa neZvidzoreso